Arsenal oo ka badisay kooxda Brighton & Hove Albion – Balcad.com Teyteyleey
Arsenal oo ka badisay kooxda Brighton & Hove Albion
Ciyaar ay ku saraysay Kooxda Arsenal oo dhawaan soo dhamaatay ayay 2-gool ku adkaatay Arsenal, iyadoo Goolashaasi ay ka dhaliyeen Nacho Monreal iyo Alex Iwobi, taasi oo ka dhigaysa in Arsenal gaarto guushii labaad oo xiriir ah kulamada horyaalka.
Arsenal ayaa hadda soo fariisatay Booska 5-aad ee horyaalka iyagoo kaliya 6-dhibcodo ka dambeeya kooxaha labada ah ee City & United.
Kooxda Arsenal ayaa si awood leh ku bilowday ciyaarta iyadoo joogta gurigeeda, sidoo kalana dhib badan uma marin iney hanaanka ciyaarta la wareegto, Xhaka & Ramsey ayaan xasiliyay ciyaarta.
Daqiiqadii 2-aad: Alexandre Lacazette ayaa u dhawaaday inuu hogaanka u dhiibo Gunners isla bilowgii, balse kubadii uu goolka aadiyay birta ayaa ka beenisay, sidoo kale daqiiqadii 8-aad: Alexis Sanchez ayaa tijaabiyay goolka Brighton markii ugu horeysay, balse kubadii uu goosha la eegtay waxaa si sahlan u badbaadiyay Mathew Ryan.
Arsenal ayaa Daqiiqadii 16-aad: Nacho Monreal hogaanka u dhiibay Gunners, markii uu lugta midig ku dhameystiray kubad dhawr jeer halis lagu galiyay goolka Brighton, ugu dambeyntiina wuxuu ka farxiyay jamaahiirta Arsenal.
Dhanka kale Daqiiqadii 55-aad Alex Iwobi ayaa soo taabtay shabaqa Brighton kaas oo hogaanka u dheereeyay Gunners, si qurux badan ayuuna u dhameystiray markii uu cirib qurux badan ka helay Alexis Sanchez, ciyaartaasna waxay ku dhamaatay Arsenal oo ku adkaatay 2iyo 0
The post Arsenal oo ka badisay kooxda Brighton & Hove Albion appeared first on Ilwareed Online.
Diyaarado dagaal oo duqeeyay Fariisin Al-Shabaab ku leeyihiin Deegaan ka mid ah Gobolka Sh/ Hoose
Khasaaro ka dhashay weeraro ka kala dhacay Canada iyo Fransiiska